Ọkachamara Semalt na-akọwa Otu esi ewepu Data Webs
A makwaara dị ka owuwe ihe ubi, nchịkọta data weebụ bụ njikarịcha nchọgharị. Usoro nke gụnyere ịdọpụta data site na otu ma ọ bụ ọtụtụ isi mmalite. Usoro ntanetị nke data na-ejikarị ndị ahịa na ndị na-ahụ maka ntanetị iji kpoo ahịa ha ma nyefee ọdịnaya ọdịnaya maka weebụsaịtị ha. A na-emecha kpochapụ data ntanetịime na ụdị nchekwa faịlụ na datasheets.
Gini mere ichopu data?
Dịka onye na-webmaster, nchịkọta data bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka mgbasa ozi n'ịntanetị gị. Dabere na mkpa gị na nkọwa gị, ị nwere ike ikpebi ịchọta na jikwaa data maka onwe gị ma ọ bụ were ndị ọkachamara nyocha na weebụ. Ndị a bụ ngwá ọrụ ndị ahịa na-ejikarị na-achọta data na ebe nrụọrụ weebụ.
Mozenda bụ mmemme nke na-enyere ndị ahịa aka iwepụta data achọta na ibe weebụ n'enweghị ihe mmemme. Akụrụngwa na-enye otu nnwale mbipute n'efu otu ọnwa maka ụlọ ọrụ weebụ ha. Ngwa Mozenda gụnyere nke interface enyi na enyi nke na-enye ndị na-ede blọgụ, ndị na-ahụ maka ahịa ahịa, na ndị ahịa n'ahịa iji wepụ data bara uru site na otu ma ọ bụ ọtụtụ isi mmalite.
Mozenda nwere ndị ọrụ ntanetị nwere nkwado zuru ezu na-aza ozi, oku, na ozi ịntanetị banyere nsogbu gị n'oge. Ngwá ọrụ ahụ nyere ngwọta ego azụ ahịa nye ndị na-edekọ mkpesa banyere usoro Mozenda iji wepụ data.
Ụlọ data data weebụ
Iji wepụ data data weebụ, ịkwesịrị ịrụ ọrụ na ngwá ọrụ nwere ike ịdọpụ ngwa ngwa na weghachite data sitere na saịtị na-enweghị mmemme. Ụlọ ntanetị weebụ bụ ngwá ọrụ dị mkpa nke na-enye ọrụ ọrụ dịka ntanetị weebụ, akpaaka data, na nyocha ihuenyo..
Ụlọ ọrụ data ntanetị na-enyefe ndị ahịa na-arụ ọrụ na iwepụta data ma na-enwe ndetu aha ha ma na-ebuli elu na algọridim. Ngwaọrụ a bụ ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma iji mee ihe n'eziokwu. Gaa na laabu ụlọ ọrụ weebụ dị larịị ka ị budata otu usoro ikpe otu ọnwa.
DataDome bụ ngwá ọrụ kasị mma maka ndị ahịa na-arụ ọrụ na igbochi na igbochi spiders na bọọlụ si na-ekpochapụ ọdịnaya ha. Jiri uru DataDome mee ihe iji chọpụta na nyochaa ikike ọhụrụ gị na ụlọ ahịa ahịa dijitalụ.
Site na DataDome, ị nwere ike nyochaa data ebe nrụọrụ weebụ na-egbochi ịghọ aghụghọ ugbua n'ịntanetị na ozugbo. Ngwaọrụ ahụ na-egbochi spammers site na ijikwa akara nke akaụntụ ịntanetị. Deba aha ma budata otu ikpe ikpe otu ọnwa na ntanetị weebụ ma kpoo ndị ọrụ gị ezigbo ọdịnaya. DataDome gụnyere nke ndị na-akwado ọrụ na ndị enyi na-enye ndụmọdụ na esi ewepụ data ma maka ntanetị na ntanetị.
Mgbe ọ na-abịa nchịkọta data weebụ, ihe dị mma. Ekwela ka njehie dị mfe kpuchie gị mgbasa ozi n'ịntanetị nke ị nọworo na-eguzobe maka afọ ụfọdụ. Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ buru ibu nwere ike ime ngwa ngwa maka ịkwado gị. WebCrawler na-enye ndị ahịa na ndị na-ede blọgụ ohere iji chọpụta ụlọ ọrụ ahịa. Hụ WebCrawler ka ụlọ ọrụ ahụ gbaara gị ma dọpụta ọdịnaya na data maka gị.
Ọgwụgwụ na-eme ka ụzọ dị mma. Mgbe ịchisịrị data na ozi site na ebe nrụọrụ weebụ, ụzọ ị na-echekwa ma jikwaa data ahụ dị ọtụtụ. Ịchekwa data na faịlụ na akwụkwọ datasheets dị ka Excel bụ nke a na-atụ aro. Chọpụta data weebụ na ngwaahịa ndị a pụta ìhè iji nweta mgbasa ozi ahịa siri ike Source .